Mitombo ireo sitrana, mitombo koa ny maty : omaly fotsiny, 15 no matin’ny pesta teto Antananarivo | NewsMada
Mitombo ireo sitrana, mitombo koa ny maty : omaly fotsiny, 15 no matin’ny pesta teto Antananarivo
Raha voalaza fa hoe mitombo ny isan’ny mararin’ny pesta efa sitrana, tsy mitsaha-miakatra ihany koa anefa ny isan’ireo mamoy ny ainy. Omaly fotsiny, 15 no maty teto Antananarivo. 911 manerana ny Nosy.
Nanambara ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, fa araka ny tarehimarika farany voarain’izy ireo, 95 ireo matin’ny pesta manerana ny Nosy hatramin’ny omaly alakamisy. Vao ny alarobia teo anefa, 80 no maty, araka ny loharanom-baovao avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany, hita tao amin’ny tranonkalan’ny BNGRC. Izany hoe, omaly fotsiny, 15 no isan’ny olona matin’ny pesta. Fantatra fa teto Antananarivo avokoa ireo trangana fahafatesana ireo. Manerana ny Nosy, voalaza fa tafakatra 911 hatramin’ny omaly ny tranga ahina ho pesta. Ny 43 amin’ireo tranga vaovao, voatily fa pesta. Avy eto Antananarivo avokoa ny 27 amin’ireo tranga vaovao voatily ireo. Voalaza fa 554 amin’ireo marary 911 no efa sitrana hatreto.
Hatramin’ny volana aogositra no mankaty, 31 ireo matin’ny pesta ho an’Antananarivo manokana. Maty teny amin’ny hopitaly ny 31 tamin’ireo, raha tany amin’ny fokontany na ny tanàna nisy azy ny 24.
Mikasika ny fitiliana na ilay “Test de diagnostic rapide” TDR, nanamafy ny Sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana fa ireo marary mampiseho ny fambaran’aretina pesta ihany no tokony hanao izany. Mitovy avokoa ny fitsaboana omena ny rehetra, na ireo ahina na ireo efa voamarina fa tena voan’ny pesta.
Fehiny, na efa manao ezaka aza ny fitondrana, fampandriana resaka ihany ny filazana fa voafehy ny fihanak’ity aretina pesta ity. Porofon’izany ny hamehana amin’ny fiantsoana vonjy sy fanampiana nataon’ny fitondrana avy any ivelany, omaly.